Internet beats Sex — MYSTERY ZILLION
Internet beats Sex
သတင်းဌာနတစ်ခုက စစ်တမ်းတစ်ခုလုပ်တယ်။ အဲဒါကတော့ အင်တာနက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံမှူ ဘာကိုရွေးမလဲ ဆိုတဲ့စစ်တမ်းတစ်ခုပါ။
အမေရိကန် က လူ၂၀၀၀ ကိုမေးခဲ့တာပါ။ မိန်းမ ၄၆%က နှစ်ပတ်တိတိ လိင်မဆက်ဆံပဲ နေနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အင်တာနက်မရှိရင်တော့ မရဘူးတဲ့။ အဲ ယောကျ်ားလေး ၃၀% က လဲ အဲဒီလိုပါပဲတဲ့။
အော်အင်တာနက် ကြီးကြောင့် လူတွေလဲ တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ Machine Civilization Society ကိုရောက်နေကြပြီ။
me2... i can't stay without internet evenamorning ...
Ya that right .:39:
i can't still without internet even one day too.:68:
အစရှိတော့...နောင်နောင်ဆိုသလို... ဒီလောက် ... ပိတ်ဆို့...ဘန်းပြီး...လိပ်တွေ..ပတ်ကျိတွေနဲ့ အပြိုင် ဖြစ်နေတာတောင်မှ.... အမှတ်မရှိ ဘူး... မိုးလင်းရင်... Internet မသုံးရရင်ဘဲ... လူကအပြေးဘဲလေ့ကျင့်နေရမလို... ဒိုက်ဘဲ ထိုးနေရမလိုလို...:D
ဟုတ်ပ .. အရင်တုန်းက ဘန်းကျော်မှာ TV တွေအိမ်တိုင်းမှာ မရှိကြဘူး၊ ခုဆို အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာ ရှိတယ်။
အခုလဲ .. ဘန်းကျော်မှာ Internet အိမ်တိုင်းမှာ မသုံးသေးဘူး၊ နောက်တော့ သုံးလာကြမယ်ထင်တယ်။
Internet က TV လိုမျိုး အိမ်တိုင်းလိုလိုမှာရှိလာရင်တော့ ညီးငွေ့လာပြီး တခြားအသစ်တစ်ခုကိုရှာအုံး မယ်ထင်တယ်။
ခုလဲ တချို့လူငယ်တွေ Internet ပေါ်မှာကြီး မထိုင်ကြတော့ဘူး။ အပြင်ထွက် disco bar သွားတာတို့ လျှောက်လည်တာတို့ လုပ်လာကြတယ်။ အိမ်မှာချည်း ငုတ်တုတ်ကြီး Internet နဲ့ Games နဲ့ပဲ မနေကြတော့ဘူး၊ တချို့တချို့တွေပါ။
ကျနော်ကတော့ မိုးလင်း pc power on တာနဲ့ ဒီဖိုရမ်ကို ရောက်တော့တာပါပဲ။
ခုလောလောဆယ်ပါ၊ နောက်ကျရင်တော့ လာဖြစ်ချင်မှ လာဖြစ်မှာပါ။ :67:
ဟုတ်ပ ဒီမနက် သတင်းစာမှာတောင်ဖတ်လိုက်ရသေး။
ဟုတ်လဲဟုတ်လောက်ပါတယ် ။ အနော် ရည်းစာတောင် အနော်ကို internet နဲ သူ့ ဆို Internet ကို တန်ဖိုးထားလို့် တဲ့ ။ အနော်ကပြောလိုက်ပါတယ် ကျေးဇူးမကန်းနဲ့ လို့ :68:။ကိုယ်တို့ လဲ internet ကျေးဇူးနဲ့ တွေ့လာတာပဲလို့ :101:။နောက်နေလည်းကြ ကော ကောင်မလေးက bye bye ပြသွားကော:(( ။
ဟယ် ကောင်မလေး သနားစရာ။ ဒီမှာယှဉ်ပြနေတာက Internet beats SEX ဆိုတော့။ အင်း ... :106::106:
ဟုတ်ပါတယ် internet ကိုမသုံးပဲနေဖို့က မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူး... အခုလိုသူနိုင်ကိုယ်နိုင်အပြိုင် ကြဲနေတဲ့ IT ခေတ်ကြီးမှာ အင်တာနက်မသုံးပဲနေရင်မျက်စိတွေနားတွေပိတ်ထားသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျာ ......:39: :39: :39:
တမျိုးမ ထင်လိုက်နဲ့ နော် အပြင် မှာတွေဘူးဘူး country ခြားနေလို့ ။online ချစ်သူ :P
တမျိုးမ ထင်လိုက်နဲ့ နော် အပြင် မှာတွေဘူးဘူး country ခြားနေလို့ ။online ချစ်သူ
ဘာကြီးလဲ mm_legend ရဲ. :O
ဘာမှလဲ မြင်ရ၀ူး ..... :43:
Ma Ei Ei can't stayaday not surfing internet.:D:D:D:D:D
You can't see it because youtube is banned in Myanmar.
Tar Tay wrote: »
နာ့ ဒယ်ဒီကို နင်ဘာပြောတာလဲ အေ့:p
Istein ... သူကိုယ်တိုင်ဘာမှမရေးပဲ သူများတွေကိူလျှောက်ပြောနေတယ် ......
ဟဲ ဟဲ ... ဘယ်ပြောမှာလဲ Istein က သူများတွေနဲ့ ပြောင်းပြန်လေ ....Istein က Internet ကို မသုံးပဲနေနိုင်တယ် .... ဒါပေမဲ့ ... ... ...
အဲ ... တော်ပီ ( ဆင်ဆာ ဖြတ်တယ် :P )
( ဒါကြောင့် ခုတလော Istein ပျောက်နေတာ ... ခရီးသွားတာတဲ့ ... Reason တွေ ... ):D:)) )
အဲဒီ သီချင်း ကျွန်တော်သိတယ်။ "တူးတူးရဲ့ မိဆိုး' အဲ ဘာဆိုတုန်းပဲ။ :D မေ့သွားပြီ။ အင်တာနက်မှာ ပြန်ရှာကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ (တရုတ်ပြည်မှာဆို ကိုယ် စိတ်ရောဂါကုဌာနကို ရောက်လောက်ပြီ၊ အင်တာနက်သုံးတဲ့ နှုန်းက :39::39::39: ) မဘန်းတဲ့ media player လေးနဲ့ မျှဖို့ ကူညီပါဦးဗျာ။ အဲဒီသီချင်း ကျွန်တော့်မှာ ရှိတယ်ဗျ။ (ကူးထားတာ \_:D/\_:D/)
အခု အင်တာနက် သုံးလွန်းလို့ ချစ်ရသူက တော် တော် စိတ်တိုနေပါတယ်..........:14:
အခုတောင် phone တွေ ဆက်၊ dial-up သုံးထားတော့ busy တွေဖြစ်
နောက်ဆိုရင် internet beats love ဖြစ်တော့မယ်..........:D
အကယ် တော့ ဘ၀ လက်တွဲ ဖော်က လက်တွဲ ဖော် ။ အင်တာနက် က အင်တာနက် ပါ ။ရော လိုက်ရင် တော့ ကောင်ဘူး ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လည်း internet မရှိ ရင် မနေတတ်ပါဘူး ။
တရုတ်သတင်း မှာ တွေ့လိုက်တဲ့ ရိုက်ချက်အရ အားလုံး သတိ၊ (ယောင်သွားလို့) အခု MZ အဖွဲ့သား အတော်များများ (ကျွန်တော် နောက်နားက ယောင်တောင်ပေါင်တောင် အပါ) စိတ်စွဲ ေ၀ဒနာသည်တွေ ဖြစ်ကုန်ပါပြီခင်ဗျား၊ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့ :67::67::67:
ဟ ဒါဆို ငါအရင်ဆုံး အရူးစာရင်းထဲ ဝင်သွားမယ် တရုတ် မှာဆို။
ဒါကတော့ အစွဲ အလန်းလို့တော့ ပြောလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ရောဂါလို့ ပြောတာ အဲဒီငတိလွန်တာပဲဗျ။ လူတိုင်း ကအရူးတွေပဲလေ၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားရာမှာ ရူးသွတ်နေကြသူတွေပဲ။
အဲဒီ ဆရာဝန်ကိုလဲ သုသေသနရူး ရူးနေတဲ့လူလို့ ပြောလို့ ရတာပဲလေ။
ကြည့်ရတာ တရုတ်မှာ အင်တာနက်သုံးသူ 4800 million ရှိတယ်ဆိုတော့၊ အသုံးပြုတွေကို ထိန်းတဲ့အနေနဲ့ brainwash လုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ Internet ရဲ့ အရသာကလဲ အခါးပဲဖြစ်ရမယ် ... ... ...
ပုရွက်ဆိတ်လေး ရဲ့ Thread မှာလဲရေးထားဖူးတယ် .....
လောကမှာ အစွဲလန်းဆုံးအရသာက အခါးတဲ့ ..... မယုံရင်ပြောပြမယ် .....
ကြက်ဟင်းခါးသီး ..... အခါး .... စားလေ့မရှိရင်ဘယ်သူမှမကြိုက်ပေမဲ့ စားဘူးသွားရင် စွဲတယ်။
ချောကလက်ခါးခါး ..... Alexander ကိုပဲကြည့် ... စွဲနေပီ ...
Coffee ခါးခါး ..... စွဲတယ် ... Alexander ဆို Espresso အရမ်းကြိုက်တာ။ (ကံကောင်းတာက မော်ကျွန်းမှာ Espresso ကော Cappuccino ကောရတယ်)
ဆေးလိပ် .... အခါး .... စွဲတာပဲလေ ... ( ဒါတော့ Alexander မသောက်ပါ )
အရက် ... ... အခါး ... အရက်ကြောင့်သေတဲ့လူတွေက သေတာတောင်နောင်တမရဘူးဆိုပဲ ... ( ဒါလဲ Alexander မသောက်ပါ )
ဆေးခြောက်၊ကိုကင်း၊ဘိန်းဖြူ ...... အခါးဆုံး ... အစွဲဆုံး ... သေမှသိရက်နဲ့တောင်သုံးကြတယ် ... ( Alexander ဒါကိုရှောင်တာ မပြောပဲတောင်သိမှာပါ ... )
ဒါပေမဲ့ .... အဲဒါတွေက အဆိုးဆုံးတော့ မဟုတ်သေးဘူးဗျ။
အဆိုးဆုံးကဘာလဲသိလား ..... ???
" အချစ် "
အပေါ်ကဟာတွေကို လူတွေရှောင်နိုင်ပေမဲ့ ... ဒါကိုတော့မရှောင်နိုင်ကြဘူးနော် :78:....... ( Alexander လဲ ရှောင်နိုင်ဘူး:D )
ဒါကြောင့်လဲ အငဲ ကပြောတာ ... ~~~ အချစ်ဟာ ခါး-ခါး-ခါး ~~~:))
And, Alexander say ... အချစ် = အခါး :39:
အခုတော့ .... အင်တာနက် = အခါး .... လို့ထပ်ပြောရတော့မယ် .........
guengey ပြောတာသဘာကျပါတယ်။။။။ ( တကယ် တော့ ဘ၀ လက်တွဲ ဖော်က လက်တွဲ ဖော် ။ အင်တာနက် က အင်တာနက် ပါ ။ရော လိုက်ရင် တော့ ကောင်ဘူး ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လည်း internet မရှိ ရင် မနေတတ်ပါဘူး ။ကျပါတယ်) :5:
ကျွန်မလဲအဲလိုပဲယူဆပါတယ် ။။။။။။။။ :O:P
အင်တာနက်သုံးတယ်ဆိုတာကလဲချစ်သူကတားတာဟာ chatting ကိုတားတာပဲဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် အလုပ်အတွက်လုပ်တဲ့ကစ္စအ၀၀ ကိုတော့တားမယ်မထင်ပါဘူး
ဒါနဲ့အင်တာနက်မရှိရင်မနေတတ်ဘူးဆိုတဲ့ လူတွေကိုပိုပြီးသေချာအောင်မေးစေချင်ပါတယ်:14: chatting မလုပ်ရရင်မနေနိုင်တာလား:(( အင်တာနက်ကနေဗဟုသုတတွေမရှာဖွေရရင်မနေနိုင်တာလားဆိုတာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ကျွန်မတော့ မchat:103: ပဲကိုမနေနိုင်တာပါ:67::)) ဘိန်းစွဲသလိုပါပဲအခုလဲဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်မဖြတ်ခင်ညီမနဲ့ဆက်သွယ်ချင်ရင်:101: [email protected] :101:ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ။။။။။။:77:
အနော်က သိပ် မချက်ဖြစ်ဘူး။ sg pool ကြည်တယ် ။ ဘောလုံးပွဲ ကြည်တယ် ။ ပညာ ရှာ တာ ပေါ့။ mz ၀င်တယ် ။ :P:P:P:P:P:P
mayookhin wrote: »
ကျနော်က chatting ကိုလုံး၀မ၀င်ဖြစ်သလောက်ပါပဲ ....
gtalk တောင် မေ့သလောက်ရှိမှ တစ်ခါ၀င်ဖြစ်တာ။
ကျန်တာကတော့ ... online တက်ပြီဆိုရင် ... အကုန်လုပ်ဖြစ်ပါတယ် ...
Software Download, Anti-Virus Download, email, web browsing, googling, MZ, Reading news, .... .... ... , .... ... ...
ကျနော်လဲ ကို Alexender လိုပါပဲ။ ချက်ထက်ဆိုင်ရင် ဖိုရမ်ကို ပိုသုံးဖြစ်တယ်။ ဖိုရမ်သုံးရတာ ပိုအကျိုးများတယ်ထင်တာပဲ။ ဒါကြောင့် ကျနော့ ပို့တွေ တခါတရံ ချော်ထွက်နေတတ်တယ်။
ကိုစေတန်ကြီးစကားကို ကိုးကားလိုက်ဦးမယ်။:5: 'မမေးခင် အရင်ရှာ၊ mz မှာ' အဲဒါကတော့ ၇၅% လောက်လုပ်ဖြစ်တယ်ဗျ။ အင်တာနက်ကြီးကို တစ်လိုင်း၊ ဘ၀လက်တွဲဖော်ကိုတစ်လိုင်း၊ အဟဲ။ နယ်ကအိမ်မှာဆို မီးလည်း အဲလိုပဲ (တိုးတိုးတိတ်တိတ်နော်၊ :71:)
သန်ရာသန်ရာလို ့ပြောမလားပဲ......ကျွန်တော်လည်း internet ပဲကြိုက်တယ်
ဒါဆိုထမင်းပဲစားမယ် ရေမသောက်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောလား:d
ထမင်း အရင်စားလေ ... နောက်တော့မှ ရေသောက်ပေါ့။
အနော် က Internet လဲကြိုက် တယ် ။ ဟိုဟာလည်း ကြိုက်တယ် (အဲ့ တမျိုးမတွေးနဲ့ chat တာကိုပြောတာ :P:P:P
ထမင်းဆိုတာ အရည်သောက်လေး ပါမှ စားလို့ကောင်းတာ........:p
အနော်ဆိုရင် ဟင်းရည် ကြိုက်တတ်လို့ (4/5)ခွက် လောက်သောက်တယ်.........:d
အင်တာနက်နဲ ့ချက်နဲ ့က တလို်င်းစီပါ...အင်တာနက်၀င်တိုင်းလည်းချက်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးး ဒါပေမယ့်ချက်နေတုန်းမှာတော ့အင်တာနက်သုံးနေတယ်.....ချက်ဆိုတာ အင်တာနက်ရဲ ့တစိတ်တဒေသပါ..အင်တာနက်ဆိုတာမရှိမဖြစ်လို့ယူဆပါတယ်..ချက်ကလည်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော ့..အဲလိုပြောလို ့လည်းမရပြန်ဘူးဗျ....ချက်ဆိုတာqq လုပ်ဖို ့တခုတည်းနဲ ့အတွက်မှမဟုတ်တာလေ..အကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိကြတာပဲ....မိသားစုနဲ ့ဆက်သွယ်ဖိို ့..သူငယ်ချင်းတွေနဲ ့အချိန်းအချက်လုပ်ဖို ့...သီချင်းတွေ ဖိုင်တွေ ရှယ်ဖို ့....ကိုယ်ချစ်သူနဲ ့စကားပြောဖို ့....ကိုယ်သန်ရာသန်ရာဖို ့...ချက်ထဲမှာချည်းပဲအချိန်ကုန်နေတာတော့ သဘာ၀မကျပါဘူး....
ကျနော်ကတော့ mz ကိုတနေ ့မ၀င်ရရင် တခေတ်နောက်ကျသွားသလို ခံစားရတယ်...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကို်ယ်စိတ်ပျော်ဖို ့ပါပဲ.. :d
ဟုတ်ပါ့ ဟုတ်ပါ့။နေမကောင်းလို. ၁၀ ရက်မလာတာ ဘာမှမသိတော့သလိုပဲ။ဘယ်ကပြန်စရမှန်ူသိတော့ဘူး။၄၈နာရီလုံးအွန်လိုင်း ၀င်တာတောင်မ၀ဘူး .မ၀လို.ထပ်၀င် အိပ်ရေးပျက်နဲ့ ဆေးရုံတောင်ရောက်သွားတယ်.mz ဒုတ်ခပေးတာလည်းပါတယ် ဟီဟိ
သူတို.ဖိုရမ်ထဲမှာ မျက်စိလည်ပြီးပြန်ထွက်လို.မရ ရင်းနဲ့ ၃ ရက်တစ်ခါပဲအိပ်တော့ ဆေးရုံရောက်ရော:77:
ကျနော်တော့ mz ကြီးကိုစွဲလမ်းနေပြီ။ အဲဒါဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲ မသိ။ သိရင်နည်းပေးကြနော်။ မဟုတ်ရင်တနေ့ တနေ့ ဖိုရမ်တွေမှာပဲ အချိန်ကုန်နေလို့ ဘယ်နေ့အိမ်ကနေခေါင်းနဲ့ ဆင်းရမလဲ မသိဘူး။
အိုင်းစတိုင်းကို ဖိုရမ်တိုင်းမှာတွေ့ပ ... စောင့်ကြည့်နေတယ်နော် ...
mz တော့မဖြတ်ပါနဲ့ ကိုအိုင်း ရာ:68: ။ ဘုန်းကြီးကျောင်း ရှာထားပေါ့ ။ အဆင်သင့် ဖြစ်တာ ပေါ့ ။:P:)):P
ကိုအိုင်းသာ ဒီတစ်ခါဖျက်ရင်ထိုင်ဝမ် ကိုလိုက်လာပြီး ဆိုမားလီးယားပို့လိုက်မယ်နော် ဟွန့်
ကျွန်တော်ကတော့ internet ကိုကလိဖို့သုံးတာတော်တော်များတယ်
online ပေါ်ကိုရောက်တာနဲ့ security focusတို့ defcon တို့ milworm တို့စတာတွေကိုပဲတန်းပြေးတော့တာပဲ
ပြီးရင်တော့ Google Dork နဲ့ပတ်မွှေတာ:D
ကလိတာများလို့ thai က **** site တွေရဲ့ web master တွေလဲကျွန်တော့ကိုတော်တော်အမြင်ကတ်နေလောက်ပြီ:D
anyway, ကျွန်တော်ကမြန်မာ site ဆိုရင်တော့မကလိပါဘူး
Chatting ကတော့ ဝင်ကိုမဝင်တာ
ရေကတော့ငတ် မှသောက်တာပေါ့........ပင်လယ်ရေမဖြစ်ဖို ့တော့လိုတာပေါ့